ဖူးနုသစ်: မ နောက်က ဘဲလိုက်တော့ ဘူးကျတယ်
ခေါင်းစဉ်မြင်လို့ အထင်မလွဲပါနဲ့။ အဲဒါ အခု ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ မြန်မာစာဆရာ ဦးကြီးမြင့် ဆယ်တန်းနှစ်က သင်ပေးခဲ့တဲ့ “ပဲ” နဲ့ “ဘဲ” နောက်ပြီး “ဖူး” နဲ့ “ဘူး” ရဲ့ အသုံးအနှုန်း ကွဲပြားခြားနားပုံကို မှတ်တဲ့ စကားပါ။ ဆရာကတော့ မင်းတို့ကောင်တွေကို ပေါက်ကရ သင်ပေးထားရင် ဘယ်တော့မှ မေ့မယ့် ကောင်တွေ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး အဲဒီလို သင်ပေးထားတာပါ။ အမှန်ပါပဲ။ အခု ဆယ်နှစ် ကျော်တဲ့ အထိ မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ။
ဟုတ်သားပဲ။ မှန်သားပဲ။ တော်သားပဲ။ စတဲ့ ထောက်ခံပြီး ပြောဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေမှာ ပစောက်နဲ့ ရေးတဲ့ “ပဲ” ကို သုံးပါတယ်။မဟုတ်ဘဲ မလုပ်ဘဲ မစားဘဲ စတဲ့ အငြင်းပြ စကားလုံးတွေမှာ ဘကုန်းနဲ့ ရေးတဲ့ “ဘဲ” ကို သုံးရပါတယ်။ အဲဒါက “ပဲ” နဲ့ “ဘဲ” ရဲ့ အသုံးအနှုန်း ကွဲပြားချက်ပါ။
အလားတူ ပါပဲ။ စားဖူးတယ်။ လုပ်ဖူးတယ်။ ရေးဖူးတယ် စတဲ့ လုပ်ဖူးကိုင်ဖူးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြောတဲ့နေရာမှာ ဖဦးထုပ် နဲ့ ရေးတဲ့ “ဖူး” ကို သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြောဘူး၊ မလုပ်ဘူး၊ မစားဘူး၊ စတဲ့ ငြင်းတဲ့ ဝါကျတွေမှာ ဘကုန်းနဲ့ရေးတဲ့ “ဘူး” ကို သုံးပါတယ်။ အရှေ့မှာ “မ” ရှိ နေရင် နောက်က “ဘဲ” နဲ့ “ဘူး” လိုက်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မနောက်က ဘဲလိုက်တော့ ဘူးကျတယ် လို့ မှတ်ထားလိုက်တာ အလွယ်ဆုံးနည်း ပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ မမေ့သလို ဘယ်တော့မှလည်း မမှားတော့ပါဘူး။
ဆရာ သင်ပေးခဲ့တာတွေထဲက မှတ်မိတာလေး တစ်ချို့ကို ပြန်ပြီး ဝေမျှ ချင်ပါတယ်။ မြန်မာစာမှာ တစ်ချို့စကား တွေမှာ အသံထွက်နဲ့ ရေးတဲ့နေရာ ကွဲပြားပါတယ်။ အများဆုံးမှား တတ်တဲ့ စကားလုံးကတော့ နေ့တဓူဝ ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ မြန်မာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းထဲမှာ နေ့တဓူဝ ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နေ့တဓူဝ ဆိုတာက အသံထွက်ပါ။ ရေးတဲ့ အခါမှာတော့ နိစ္စဓူဝ လို့ ရေးရပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ချို့တွေ မှားတတ်တဲ့ စကားလုံး နောက်တစ်လုံးက ယေဘုမ်ရ ပါ။ ယေဘုမ်ရ ဆိုတာ အသံထွက်ပါ ရေးရင်တော့ ယေဘုယျ လို့ ရေးရပါတယ်။ အင်ညမင်ည လို့ အသံထွက်တဲ့ စကားလုံး ကိုတော့ အညမည လို့ပဲ ရေးပါတယ်။
ဆရာ သင်ပေးခဲ့သမျှ ထဲက ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး သင်ခန်းစာကတော့ သရုပ်ဖော် စာစီစာကုံးရေးနည်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ကို ရှိပြီးသား အကြံအစည်ကို အနည်းဆုံး ၃ မျက်နှာ ရှိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆွဲဆန့်ရမယ် ဆိုတဲ့နည်းကို ဆရာက သင်ပေးပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းကို ဆွဲဆန့်ရတာ မခက်ပါဘူး။ ရှိပြီးသား စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို နာမဝိသေသနတွေ ကြိယာဝိသေသနတွေ နေရာပြပုဒ်တွေ ထည့်ရေးလိုက်ရင် ဆွဲဆန့်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
၁။ စမ်းချောင်းကလေး စီးဆင်းနေသည်။
၂၊ စမ်းချောင်းကလေးသည် မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်းနေသည်။
၃။ စမ်းချောင်းကလေးသည် မြောက်မှတောင်သို့ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည်။
၄။ ကြည်လင်သော စမ်းချောင်းကလေးသည် မြောက်မှတောင်သို့ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည်။
၅။ တောစပ်၌ရှိသည့် ကြည်လင်သော စမ်းချောင်းကလေးသည် မြောက်မှတောင်သို့ တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည်။
၆။ တောစပ်၌ရှိသည့် ကြည်လင်သော စမ်းချောင်းကလေး တစ်စင်းသည် မြောက်ဖက်အရပ်မှ တောင်ဖက်အရပ်သို့ ချိုမြိန်သာယာလှသော ရေစီးသံဖြင့် တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည်။
အဲဒီစာကြောင်း ၆ ကြောင်းကို ယှဉ်ကြည့်ပါ။ စမ်းချောင်း ရေစီးတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ပထမ စာကြောင်းက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ အဲဒီတော့ တိုပါတယ်။ နောက်စာကြောင်းတွေမှာတော့ နာမဝိသေသနတွေ ကြိယာဝိသေသနတွေ နေရာပြတဲ့ အညွှန်းတွေ ပါလာပါတယ်။ နောက်ဆုံးစာကြောင်းကတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းအောင် အဖွဲ့အနွဲ့ကလေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခု သိထားဖို့ ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သရုပ်ဖော်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ့်အရေးအသားကို သတိထားမိစေချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူတစ်ပါး မတွေးတဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ မြင်ကြည့်ရပါတယ်။
နွေရာသီသို့ ရောက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ပင်ယံထက်မှ တွန်သံချိုသည့် ရွှေဥသြသည် လွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ တေးကို ဖွဲ့သီနေသည်။
ဒါက လူတိုင်း မြင်တဲ့ အမြင်ပါ။ လူတိုင်းက ဥသြငှက်ဆိုရင် တွန်သံချိုတယ် အသံကြားရင် လွမ်းစရာ ကောင်းတယ် လို့ပဲ မြင်နေကြပါတယ်။ အဲဒါကို နောက်အမြင်တစ်မျိုး နဲ့ ဒီလိုရေးကြည့်လို့ ရပါတယ်။
နွေရာသီ ပတ်ဝန်းကျင်က ပူပြင်းလှချိန်တွင် အလွန်တရာ အသံဆိုးလှသော ဥသြက အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိ အော်မြည်နေသဖြင့် ပူပြင်းလှသည့် ကြားတွင် သူ့ အသံကို ကြားရသောကြောင့် ပို၍ စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်စေသည်။
ဒါကတော့ သူများနဲ့ မတူပဲ ဖောက်ထွက်ထားတဲ့ အတွေးမျိုးပါ။
နောက်ဆုံး သိဖို့ အကြောင်းအရာကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြင်အောင် ရေးတဲ့နည်းပါ။ ကိုယ့်တွေ့မြင်ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စာဖတ်သူတွေရဲ့ မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်စေချင်ရင် Zoom ဆွဲတဲ့ နည်းကို သုံးရပါတယ်။ Zoom ဆွဲရာမှာ အဝေးက အနီးကို ဆွဲတဲ့နည်း နဲ့ အနီးက အဝေးကို ဆွဲတဲ့နည်း ၂ နည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်က အနီးက အဝေးကို ဆွဲတဲ့နည်းကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အောက်က စာပိုဒ်တွေကို ယှဉ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်သည် အရိပ်အာဝါသကောင်းသော ကုက္ကိုပင်ကြီး တစ်ပင်၏ အောက်တွင် ထိုင်နေသည်။ ကောင်းကင်တွင် နေက ချစ်ချစ်တောက် ပူပြင်းနေသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင် တမျှော်တခေါ်ရှုမဆုံး နိုင်သော လယ်ကွင်းများရှိသည်။ ကျွန်တော် ထိုင်နေသော နေရာ၏ ဘေးတွင် နွားလှည်းတစ်စင်း ရပ်ထားသည်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီသို့ ဦးတည်၍ ပျံသန်းသွားသော ပျံလွှားငှက် နှစ်ကောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော့်ဘေးနားက လှည်းလမ်းတွင် ဖုန်တထောင်းထောင်း ထနေသည်။ အဝေးဆီမှ တောင်စဉ်တောင်တန်းများက ညို့မှိုင်းနေကြသည်။
ကျွန်တော့်နံဘေးနားက လှည်းလမ်းတွင် ဖုန်တထောင်းထောင်းထနေသည်။ ကျွန်တော် ထိုင်နေသော နေရာ၏ ဘေးတွင် နွားလှည်းတစ်စင်း ရပ်ထားသည်။ ကျွန်တော်သည် အရိပ်အာဝါသ ကောင်းသော ကုက္ကိုပင်ကြီး တစ်ပင်၏ အောက်တွင် ထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင်မူ တမျှော်တခေါ်ရှုမဆုံး နိုင်သော လယ်ကွင်းများရှိသည်။ အဝေးဆီမှ တောင်စဉ်တောင်တန်းများက ညို့မှိုင်းနေကြသည်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီသို့ ဦးတည်၍ ပျံသန်းသွားသော ပျံလွှားငှက် နှစ်ကောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ ကောင်းကင်တွင် နေက ချစ်ချစ်တောက် ပူပြင်းနေသည်။
ကောင်းကင်တွင် နေက ချစ်ချစ်တောက် ပူပြင်းနေသည်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီသို့ ဦးတည်၍ ပျံသန်းသွားသော ပျံလွှားငှက် နှစ်ကောင်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရသည်။ အဝေးဆီမှ တောင်စဉ်တောင်တန်းများက ညို့မှိုင်း နေကြသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့တွင်မူ တမျှော်တခေါ်ရှုမဆုံး နိုင်သော လယ်ကွင်းများရှိသည်။ ကျွန်တော်သည် အရိပ် အာဝါသ ကောင်းသော ကုက္ကိုပင်ကြီး တစ်ပင်၏ အောက်တွင် ထိုင်နေသည်။ ကျွန်တော် ထိုင်နေသော နေရာ၏ ဘေးတွင် နွားလှည်းတစ်စင်း ရပ်ထားသည်။ ကျွန်တော့်နံဘေးနားက လှည်းလမ်းတွင် ဖုန်တထောင်းထောင်းထနေသည်။
စာပိုဒ် (၁)၊ (၂) နဲ့ (၃) ကို ယှဉ်ပြီးတော့ ဖတ်ကြည့်ပါ။ သုံးထားတဲ့ စာကြောင်းတွေက အကုန်လုံး အတူတူပါပဲ။ စာပိုဒ်(၁) က မြင်တာကို မြင်သလို ရေးထားတာပါ။ မျက်စိထဲမှာ ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မပေါ်ပါဘူး။ စာပိုဒ်(၂) ကတော့ အနီးကနေ အဝေးကို Zoom ဆွဲတဲ့နည်းနဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပြီး စာပိုဒ်(၃)ကတော့ အဝေးကနေ အနီးကို Zoom ဆွဲတဲ့နည်းနဲ့ ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာပိုဒ်(၂) နဲ့ စာပိုဒ်(၃) က စာပိုဒ်(၁) ထက်စာရင် စာဖတ်တဲ့သူကို ပိုပြီး မြင်သာစေတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒါတွေ ကတော့ ဆရာဦးကြီးမြင့် သင်ပေးခဲ့တာတွေထဲက မှတ်မိသလောက် အကုန်ပါပဲ။ ဆရာ သင်ပေးတဲ့ နည်းလမ်းတွေကြောင့် ဆယ်တန်းမှာ ၈၀ ကို တစ်မှတ်စွန်းနဲ့ မြန်မာစာဂုဏ်ထူး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ (ကြုံတုန်းမို့ ကြွားတာပါ။ ဟီးဟီး။ :P)
Labels: စာပေရေးရာ, မြန်မာစာ
ZT တဆင့် ပို့ချတဲ့ မြန်မာစာ သင်ခန်းစာ လာမှတ်သားသွားပါကြောင်း။
မ နဲ့ ဘဲ ကို တို့လဲ အဲဒီလို မှတ်ဖူး သင်ဖူးတယ်။ သိပ်မှတ်မိလွယ်တာပဲ။ ဘယ်တော့မှ မမှားတော့ဘူး။
မြန်မာစာ သင်ရတာ ကြိုက်တယ်။ သင်တာကလဲ ကိုယ့်အဖေ ဆိုတော့.. :)
အော် မန္တလေးသားတွေ စုနေကြတာကိုး။
မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးရှင်ကြီးကိုး... တော်လိုက်တာ စာတွေ ဆွဲဆန့်ထားတာများ..
မလုပ်ဘူး။ မစားဘူး ကတော့ ရှင်းသွားပါပြီ။
မလုပ်ဖူးဘူး။ မစားဖူးဘူး….ကျတော့ရော အမှန်ကဘယ်လိုရေးရသလဲဆိုတာ သိရင် တဆိတ်လောက် ရှင်းပြပေးပါ။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အဲဒီနေရာမှာ မသဲကွဲလို့။
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါ ဆရာဒိုးဆီက သင်ဖူးပါတယ်။ သေသေချာချာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှင်းပြထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဟယ်... ၈၀ တောင်ကျော်တယ်... တော်လိုက်တာ။ ကြုံတုန်း ကြွားခဲ့ပါရစေ... ဂုဏ်ထူးမှတ်ထက် ၃ မှတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။ ၇၈ း)
ကိုပေါ -> ကိုပေါရေးထားတာ အမှန်ပါ။ မလုပ်ဖူးဘူး။ မစားဖူးဘူး။ လုပ်ဖူးတယ်။ စားဖူးတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ရေးပါတယ်။
မ နောက်က ဘဲလိုက်တယ်ဆိုတော့လည်း မှတ်ရလွယ်သွားတယ်။ မဟုတ်ရင် နေရာတကာ "ဘဲ"လိုက်နေမိမှာ :D
zoom ဆွဲပြီး ရေးနည်းတွေကို မှတ်သွားပါတယ်။ မြန်မာစာရေးနည်းကို တစ်ခါမှ ဟုတ်တိပါတ်တိ မသင်ဖူးဘူး။ စိတ်ထင်သလို လျှောက်ရေးနေတာ များတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။
ကိုဇနိက ပညာယူသွားတယ် ဆိုလို့ပြန်လာကြည့်တယ။်
ကြုံလို့ဝင်ကြွားပါတယ်၊ ၇၅ မှတ်တိတိပါ၊ စာစီစာကုံးနဲ့ အမှတ်သယ်သွားပါတယ်။
လေ့လာမှတ်သားစရာတွေ ရသွားတဲ့ပို့စ်တခုပါ ........
နာလည်း ဝင်ကြွားဦးမှ.... ဂုဏ်ထူးမှတ်ထက် ၇ မှတ်တိတိ....
နည်းပါတယ်.. ၆၈ မှတ်ပါ....။ အခု အမှတ်ကြွားသွားသူတွေထဲမှာ
တို့ နံပါတ် (1) ပဲ.. နောက်က ပြန်စရင်....။
ချပြထားတာ ရှင်းလင်းပြီး ရင်ထဲကို တဒိုင်း ဒိုင်းနဲ ့ရောက်သွားတယ်
ကျမ ကမြန်မာစာ ညံ့တယ် ကျန်တဲ့ဘာသာတွေလဲ မတော်ဘူးရှင့်
အမေကတော့ ကျောင်းစာကလွဲရင် မမအကုန်တော်သတဲ့..
မြန်မာစာဂုဏ်ထူး တွေကြည့်ပြီး လေးစား အားကျ ဂုဏ်ယူသွားပါ
တယ် မသိတာတွေအားလုံး အကုန်ဖတ်မှတ် လေ့လာသွားပါတယ်
(ရမှတ်ကတော့ စင်စင်ထက်တောင် ၃မှတ်နည်းပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် တိုးရင်းပေါင်း အကြွေးဆပ်တဲ့ အနေနဲ့ စာတွေ ကြိုးစားရေးနေပါတယ်။ အမှားတွေ့ရင် မသီတာလေးကို ပြင်ကြပါ။)
AYE ZAR said...
I am also Saya's student. Sorry to hear that he passed away already.
ကျမက တစ်ချိန်လုံး စာလုံးပေါင်းမှား သဒ္ဒါမှား အသုံးအနုန်းမှားနဲ ့။
ယေဘုယျက ဘုက တစ်ချောင်းပဲငင်တာ ဟုတ်ဘူးလားဟင်
Thanks. I have madeacorrection.